ဒီလိုလေး နပေါ ……. – Shinyoon
ဒီလိုလေး နပေါ …….
November 16, 2020 by Shin Yoon
ကိုယျ့ကို အလေးထား တနျဖိုးထားတဲ့လူပဲ ပွနျပွီး တနျဖိုးထားတော့မယျ အမြားကွီး မြှျောလငျ့ရတာ ပငျပနျးတယျလေ ။ ကိုယျ့ကို မလိုအပျဘူးဆိုရငျ ကိုယျကလဲ ဘယျလောကျပဲ လိုခငျြလိုခငျြ ဆှဲမထားတော့ဘူး မချေါခငျြလို့ မမွငျခငျြယောငျဆောငျသှားတဲ့လူကို လိုကျပွီး မချေါတော့ဘူးကိုယျ့အတှကျ မရှိမဖွဈဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထပျပွီး မသုံးနှုနျးတော့ဘူး
ကိုယျ့မာနလေး နဲနဲတော့ ထားမှ ရတော့မယျသူကတောငျ နနေိုငျသေးရငျ ကိုယျလဲ နနေိုငျရမယျဆိုတဲ့ မာန သူမှ မလိုအပျရငျ ကိုယျလဲ မလိုအပျဘူးဆိုတဲ့ မာန မရှိမဖွဈကို ထားမှ ရတော့မယျ ဝေးသှားခငျြလဲ ဝေးသှားပါစတေော့ . . . ကိုယျဆှဲမှ မွဲမယျ့လကျတှပေဲ ဘဝထဲ ရှိနတေော့လဲ ဘာပေါကျမှာလဲ ကိုယျပဲ တနျဖိုးကလြှနျးတယျ သူခကြေိုယျခပြေဲ နတောကောငျးပါတယျ ထိုကျတနျတာလောကျပဲ ပေးတော့မယျ စတေနာနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့လူတှအေတှကျ စတေနာတှေ ထားမယျ
ဥပက်ေခာနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့လူတှအေတှကျ ဥပက်ေခာပွုထားပေးတော့မယျတနျရာတနျရာပေါ့ မဟုတျရငျ စတေနာဗလပှတှပေေးလဲ နောကျဆုံးကိုယျပဲ စျောကားခံရတယျ နောငျတတှေ ရလာရုံကလှဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ ထူးမလာခဲ့ဘူးလေ နနေိုငျသှားခဲ့တာမဟုတျဘူး
ခဏခဏ ခံရပါမြားလှနျးတော့ နတေတျသှားခဲ့ရုံပါ ။
ကိုယ့်ကို အလေးထား တန်ဖိုးထားတဲ့လူပဲ ပြန်ပြီး တန်ဖိုးထားတော့မယ် အများကြီး မျှော်လင့်ရတာ ပင်ပန်းတယ်လေ ။ကိုယ့်ကို မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကလဲ ဘယ်လောက်ပဲ လိုချင်လိုချင် ဆွဲမထားတော့ဘူး မခေါ်ချင်လို့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်သွားတဲ့လူကို လိုက်ပြီး မခေါ်တော့ဘူးကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ထပ်ပြီး မသုံးနှုန်းတော့ဘူး
ကိုယ့်မာနလေး နဲနဲတော့ ထားမှ ရတော့မယ်သူကတောင် နေနိုင်သေးရင် ကိုယ်လဲ နေနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ မာန သူမှ မလိုအပ်ရင် ကိုယ်လဲ မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ မာန မရှိမဖြစ်ကို ထားမှ ရတော့မယ် ဝေးသွားချင်လဲ ဝေးသွားပါစေတော့ . . . ကိုယ်ဆွဲမှ မြဲမယ့်လက်တွေပဲ ဘဝထဲ ရှိနေတော့လဲ ဘာပေါက်မှာလဲ ကိုယ်ပဲ တန်ဖိုးကျလွန်းတယ် သူချေကိုယ်ချေပဲ နေတာကောင်းပါတယ် ထိုက်တန်တာလောက်ပဲ ပေးတော့မယ် စေတနာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့လူတွေအတွက် စေတနာတွေ ထားမယ်
ဥပေက္ခာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့လူတွေအတွက် ဥပေက္ခာပြုထားပေးတော့မယ်တန်ရာတန်ရာပေါ့ မဟုတ်ရင် စေတနာဗလပွတွေပေးလဲ နောက်ဆုံးကိုယ်ပဲ စော်ကားခံရတယ် နောင်တတွေ ရလာရုံကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ ထူးမလာခဲ့ဘူးလေ နေနိုင်သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
ခဏခဏ ခံရပါများလွန်းတော့ နေတတ်သွားခဲ့ရုံပါ ။
မပေ့ဈဖို့တှေးထားတဲ့ အရာကိုမှ ပိုပွီး သတိရနတေတျတာမြိုးလေ
ကြှနျမရဲ့ ဖှငျ့ဟ ၀နျခံခကျြတဈခုပါ
© 2022 Shinyoon • Built with GeneratePress